निर्यातको शीर्षस्थानमा रहेको पाम आयलको उत्पादन ८० प्रतिशतले घट्यो
कर्मचारी कटौती गर्ने तयारीमा उद्योग
काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये शीर्षस्थानमा रहेको पाम आयलको उत्पादन ८० प्रतिशतले घटेको छ । भारतले पाम आयलको आयातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि बजार अभावका कारण व्यवसायीले उत्पादन घटाएका हुन् ।
भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय (डीडीएएफटी)ले पुस अन्तिम साता पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि भारतले आयातकर्तालाई आयात अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएर आयात खुलाएको थियो । प्रतिबन्ध खुलेपछि व्यवसायीहरूले पाम आयात वृद्धि गरेका थिए । चैत दोस्रो सातादेखि कोरोना जोखिमलाई रोक्न नेपालले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । बन्दाबन्दीकै बीचमा भारतमा डीडीएएफटीले वैशाख अन्तिम साता पाम आयल आयातकर्ताको लाइसेन्स खारेज गरी पुनः पाम आयलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । नेपालमा असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेकोमा त्यसयता उद्योगमा भरपूर कच्चा पाम र श्रमिक भए पनि बजार नभएपछि व्यवसायीले उत्पादन घटाएका हुन् ।
वीरगञ्ज र विराटनगरमा मात्र पाम आयल उत्पादन गर्ने १८ ओटा उद्योग छन् । ती उद्योगमा हाल करीब १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा पाम आयल स्टक रहेको छ । पाम आयलको आन्तरिक माग १५ देखि २० प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले बाँकी सबै पाम आयल भारतमा निर्यात हुने गरेको थियो । अहिले बजार अभावका कारण उत्पादन घटाइएको व्यवसायी प्रदीप मुरारकाले बताए । ‘उत्पादित तेल स्टकमा छ, बजार छैन त्यसैले उद्योग खुले पनि उद्योगमा काम भइरहेको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पाम आयल प्रशोधन उद्योगमा करीब ३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । काम नै बन्द भएकाले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन । ‘काम बन्द भएकाले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने आम्दानी पनि नभएकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने ।
कोरोना महामारीको जोखिमलाई हेरेर बन्दाबन्दीदेखि हालसम्मको पारिश्रमिक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको ओसीडी फुड्सका सञ्चालक सुरेश रुङ्गटा बताउँछन् । ‘सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण काम बन्द छ तर स्थानीय निकायले कर्मचारीलाई तलब दिए÷नदिएको र यस्तो बेला कर्मचारी कटौती गर्न नपाउने बताउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, काम नै नभएपछि कर्मचारी कसरी पाल्ने ? कटौती गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’
यी उद्योगमा कुल रू. २५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । पाम आयलको निकासी रोकिए उद्योगमा यसको प्रभाव पार्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडले प्रतिबन्ध खुलाउन पहल भइरहेको बताए । ‘यसअघिको प्रतिबन्धमा दुईपक्षीय छलफलद्वारा फुकुवा गरियो । यसपालि केही समय लागेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिबन्ध फुकाउन देशबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय छलफल भएकोमा भारतले कोरोनाका कारण आर्थिक अभाव भएकाले प्रतिबन्ध लगाएको बताएको थियो । सचिवस्तरीय बैठकले पाम आयल निकासीको विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुुसार विगत २ वर्षमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात भएको वस्तु पाम आयल हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्यांकअनुसार नेपालबाट रू. ९७ अर्ब ७० करोडको कुल सामान निर्यात भएकोमा रू. १८ अर्बको पाम आयल निर्यात भएको छ । जुन कुल निर्यातको १९ प्रतिशत हो । भारतमा पाम आयलको माग बढ्दै गएपछि व्यवसायीहरूले मलेसिया, इन्डोशियालगायत तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पामको आयात गरी प्रशोधनपछि निर्यात गर्ने गरेका थिए ।